Anton Mitryushkin - जवान, तर पहिले नै प्रसिद्ध रूसी गोल रक्षक को जीवन र क्यारियर
Anton Mitryushkin जन्म फेब्रुअरी 8 क्रास्नायार्स्क को शहर मा, 1996। मिति, त्यो विदेशी फुटबल क्लब "Sion" को खेलाडी, साथै 2013 युरोपेली युवा च्याम्पियनशिप को विजेता हो।
फुटबल गतिविधिहरूको सुरु
Anton Mitryushkin स्कूल स्का Rostov यो खेल, आफ्नो घर नजिकै स्थित मा लगे। आफ्नो पहिलो कोच Konstantin Valentinovich बयको थियो। 2008 मा, एंटोन को "Rostov" सारियो। उहाँले मुख्य शहर टोली लागि अभ्यास छ बाल फुटबल लिग राष्ट्रिय टोलीलाई निमन्त्रणा प्राप्त गर्न सक्षम थियो। किनभने घटनाहरू मध्ये एक सूचना जारी गर्ने मास्को "Spartak" को प्रजनकों थियो यो भविष्यमा ठूलो सफलता को शुरुवात थियो। 14 वर्ष को उमेर मा त Anton महानगरीय फुटबल एकेडेमी मा पायो। त्यहाँ उहाँले आफ्नो पर्यवेक्षण यूरी डार्विन अन्तर्गत लिए।
प्रारम्भिक 2013 मा, यो क्लब को जगेडा बताए। तर मार्च मा उहाँले युवा रूसी च्याम्पियनशिप मा आफ्नो debut गरे। मार्च 30 मा, उहाँले सम्पूर्ण म्याच प्ले। त्यसपछि उनको टीम न्यूनतम स्कोर संग जित्यो। अर्को खेलमा एफसी "Rostov" विरुद्ध थियो। त्यसपछि Anton Mitryushkin पनि नेट लगभग सम्पूर्ण खेल मा बचाव - 82 मिनेट सम्म। यो समयमा त्यो गेट "ड्राई" राखे।
वयस्क क्यारियर सुरु
अप्रिल 10 , Valery Karpin, टाउको कोच छ जो, प्रशिक्षण आधारभूत संरचना गर्न Anton निमन्त्रणा र त्यसपछि प्रिमियर लिग को अर्को खेलमा, यो भने चिरपरिचित र अनुभव खेलाडीहरू साथ। Anton Mitryushkin एक विजयी युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई देखि फर्कंदा उहाँले पहिलो टोलीसँग तालिम भएनन् गरेको छैन।
वयस्क टोलीमा आफ्नो debut, 2014 मा भयो 8 मार्च। यसलाई "Terek" विरुद्ध खेल थियो। त्यसपछि उहाँले इतिहास मा कान्छो गोल रक्षक भयो "स्पार्टाकस।" तर 33 मा त्यो खेल मा मात्र एक थियो जो लक्ष्य, मा दोस्रो बल छुट्यो। 2015 अघि भएको मास्को टोली Anton Mitryushkin प्ले। "स्पार्टाकस" उहाँलाई लागि घर टोली थियो, तर 2016 मा उनले स्विस "Sion" को एक खेलाडी बने। रुचि जवान होनहार फुटबल खेलाडी को विदेशी प्रतिनिधिहरु, तर उहाँले सही कुरा यो मौका सम्झना छैन गर्नुभयो।
को युवा राष्ट्रिय टोली लागि Anton 2011 देखि खेल्छ। त्यसपछि उहाँले मैत्री खेलमा को रूपरेखा आफ्नो debut गरे। 2012 मा उहाँले प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको "मन्टागुए" मा र स्मारक यसलाई मा भाग। विजेता Bannikov। हाम्रो टोली दोस्रो स्थान पुग्यो।
Anton Mitryushkin - कि प्रतियोगिताको तीन मिलान प्ले र एउटा मात्र लक्ष्य स्वीकारिएको गर्ने खेलाडी। सेप्टेम्बर 25 को त्यसै वर्ष युरोपेली च्याम्पियनशिप तरुण लागि क्वालिफाइङ खेल मा क्षेत्र प्रवेश। दिनुहोस् प्रतियोगिताको अप Anton तीन लक्ष्य संग गेट छुटेका म्याच मा विजयी समाप्त भयो। तर त्यसपछि अन्य खेल भेला, ढोकाहरूसम्म "राखिएको"। राष्ट्रिय टोली त्यसपछि स्लोभेनिया र इङ्गल्याण्ड पछि डेनमार्क, मोन्टेनेग्रो को अनुहार, यसको प्रतिद्वन्द्वी surpassed। को Swedes - त्यसपछि रूस को पोर्चुगिज र इटालियनहरू, त्यसपछि हरायो। परिणाम - च्याम्पियनशिप मा एक विजय। एक दण्ड सुटआउट मा 9: खैर, खेल 10 को Swedes त्यसपछि धेरै ठूलो र जोखिमपूर्ण स्कोर संग समाप्त भयो।
यस प्रतियोगिताको भन्दा थियो पछि, जवान गोल रक्षक खेल यूईएफए मा विशेष गरिएको छ। विशेषज्ञहरूले च्याम्पियनशिप को सबै भन्दा राम्रो खेलाडी भनिन्छ, तर यो लायक छ।
र अन्तमा, सँगै आफ्नो टोली संग जित्यो जो, एंटोन Mitryushkin को पुरस्कार र संग्रामहरू जीतेको बारेमा केही शब्द। "स्पार्टाकस" संग, त्यो युवा च्याम्पियनशिप (सिजन 2012/13) र PFL च्याम्पियनशिप (2014/15) जित्यो। राष्ट्रिय टोलीसँग, 2013 मा कुख्यात ट्राफियों साथै उहाँले "चाँदी" मा 2015 लिए। युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई U19 मा मात्र यो समय।
खैर, म मान्छे क्रास्नायार्स्क मा जन्म भएको थियो के आश्चर्य, तर उहाँले सात हुँदा Anton परिवार Rostov-मा-डन उत्प्रेरित गर्ने निर्णय गरे।
जवान पिता - व्लादिमीर Anton Mitryushkin - हकी मा सोभियत संघ को एक धेरै च्याम्पियन। उहाँले क्रास्नायार्स्क "Yenisei" आफ्नो प्रदर्शन को लागि ज्ञात छ।
Sergey Narubin फुटबल खेलाडी
"पेरिस सेन्ट-Germain" Loran Blan को वर्तमान प्रशिक्षक र आफ्नो क्यारियर बारेमा सबैभन्दा रोचक कुरा
गैरी Medel - दक्षिण अमेरिका मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी
मेसीले फुटबल जूता एडिडास Pibe डे Barr10 को जीवनी प्रेरित
स्टेडियम "लोकोमोटिव": विगत र वर्तमान
स्टेडियम "सान Siro": फोटो, क्षमता, ठेगाना
ब्याट्री: उपकरण सञ्चालन, सञ्चालन सिद्धान्त र योजना
ट्याब्लेटको के बाट "Panangin"?
होटल Esperos गाउँ होटल5* (रोड्स, ग्रीस) फोटो र समीक्षा
Phlox styloid - कुनै पनि बगैचा को सजावट
Anthrax को प्रसारण को मार्गहरू। रोकथाम विधि
को adrenal ग्रन्थीहरूको एमआरआई: प्रक्रिया को लागि सङ्केत गर्छ, परिणाम तयारी
राम्रो मुड र एक मुस्कान बारेमा उद्धरण
तालिका मा बिरालो आरोहण कसरी wean गर्न? यो तालिका मा बिरालो आरोहण wean गर्न सम्भव छ?
प्रेम मनका को रूख र यसको निर्माण लागि विधिहरू
बुद्धिमत्ता - के र कसरी यो कौशल विकास गर्न